Eeg Xilliga XNUMX Premiere wuxuu ka dhigayaa Taxanaha Riwaayadda ugu Daawashada badan Apple TV + | Waxaan ka imid mac
Laga soo bilaabo Ogosto 27 -keedii, xilli labaad ee taxanaha ayaa durba laga heli karaa Apple TV + Eeg, xilli labaad oo leh soo jiidashadiisa ugu weyn ee Dave Bautista, soo jiidasho dhiirrigelisay daawashada xilli -ciyaareedkan cusub, iyagoo dhaafaya 30% kii hore ee ugu horreeyay sida ay sheegaan Waqtiga kama dambaysta ah.
Nasiib darrose taxanahan, carshiga taxanaha riwaayadaha ee ugu daawashada badnaa Apple TV + waxay ku qaadan doontaa dhawr maalmood, ilaa horudhaca xilli ciyaareedkii labaad ee Bandhigga Subaxa, horudhaca jadwalka taariikhda jadwalka ee Sebtember 17, xilli furmaya laba sano ka dib kii ugu horreeyay, sida ku dhacday See sababtuna tahay coronavirus.
Waqtiga kama dambaysta ah waxaan akhrin karnaa:
Xilli ciyaareedkeedii labaad, See wuxuu noqday taxanaha riwaayadaha soo laabashada ee loogu daawashada badan yahay Apple TV + labadii toddobaad ee ugu horreeyay ka dib markii la bilaabay, ilo ayaa sheegay. Sida caadiga ah, ma jiro xog dhagaystayaal qulquli ah oo la bixiyay, laakiin dhagaystayaasha xilli -ciyaareedkii labaad ee See intii lagu jiray labadii toddobaad ee ugu horreeyay ayaa la sheegay inay ku kordheen ku dhawaad ​​30% isla muddadii ugu horreysay ee Mareykanka.
Dave Bautista wuxuu yimaadaa xilli ciyaareedkii labaad ee See as Jason Momoa walaalkiis, sidaas darteed wuxuu ku biirayaa Alfre Woodard, oo horeyba qeyb uga ahaa xilli ciyaareedkii koowaad. Iyadoo lagu xisaabtamayo in xilli ciyaareedkii hore uusan helin dib u eegisyo wanaagsan oo aan dhihi karno waxay ku dhaaftay xanuun iyo sharaf la’aan, waa wax lala yaabo in xilli ciyaareedkan labaad uu si wanaagsan ku bilowday.
Sababta kaliya ee isbeddelkan isbeddelka ah, sida ku xusan Waqtiga kama dambaysta ah, ayaa laga helaa ka mid noqoshada Dave Bautista jilaayaasha, jilaa oo sidoo kale ka qayb qaadan doona xilli -ciyaareedka saddexaad oo hadda la duubayo.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » Noticias » Eeg Xilliga XNUMX Premiere wuxuu ka dhigayaa Taxanaha Riwaayadaha ee aadka looga daawado Apple TV +
IMac ee midabada ayaa sidoo kale boos ku yeelan doona dhacdada Apple ee soo socota